Podere Cereo-Phefulela ngaphakathi, kwaye...
Silusapho oluthandayo. Sasuka eNgilani saya e-Itali sikhangela indawo yokucothisa.
Induli ejikelezwe yimithi yomnquma kunye nomhlaba apho infinity ivula macala onke: sathandana nayo kwangoko.
I-adventure iqala: siqala ngokuhlaziya indlu. Imathiriyeli esetyenzisiweyo, i-bric-a-brac, sifuna igumbi ngalinye kunye nempahla yefenitshala ihambelane nobuhle bendalo esingqongileyo.
Iphupha lithatha imilo: Podere Cereo, ukwabelana nawe ngekona yethu yeparadesi.
IPodere Cereo ibekwe phakathi kweenduli ezingqonge iPozzolo, eVillaga (VI), kwindawo yasemaphandleni evulekileyo, enemithi inyathelo elinye kude nendlu, indawo enesimo esikhethekileyo, esifudumeleyo nesamkelekileyo. Indawo yeendwendwe inomnyango ozimeleyo. Inegumbi lokutyela elibanzi elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yokuphumla kunye nokufikelela kwigadi enkulu, igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elincanyathiselwe. Ilungele ukusingatha abantu ababini. Yonke ifenitshala iyindlela yelizwe, ngokungqongqo umthi, ngokuqwalasela iinkcukacha ezincinci. Yonke into ikhululekile, iyasebenza kwaye uya kuziva ukhululekile ngokupheleleyo!
Ndikunye neentombi zam u-Asiya kunye noGiada siya kukuvuyela ukukubamba ePodere Cereo.
Ngaliphi na ixesha lonyaka uthatha isigqibo sokusijoyina,
indalo kwindawo yethu inento entle yokubonisa kwaye ikunike kunye nentando
kukuvuyisa ngeencasa kunye namavumba. I-Podere Cereo inikezelwe kwimveliso yeoli ye-olive eyongezelelweyo ye-olive, kunye nokugcinwa kwemithi kunye namadlelo.
IPodere Cereo ibekwe phezu kwenduli kude netrafikhi kunye neendlela ezixakekileyo. Ukukhangela ngesathelayithi kaninzi kusilele ukukusa kanye kwindlu yethu. Nangona kunjalo, sincoma ukuba usete ukukhangela ukuya ekuqaleni kwendlela yegrabile ehambelana nendawo yesalathisi kwimephu. Apha uya kufumana iimpawu zeCereo ezibonisa ukuqala kwendlela. Landela indlela enqumla emahlathini ukuya kwifama yethu.
Ukuba kukho nantoni na oyifunayo, ndingummelwane nje. Kwaye ukuba ufuna ukwabelana ngeglasi yewayini okanye i-nibble kunye nosapho lwethu, oko kungcono! Ukuba uyafuna, siya kukuvuyela ukukubonisa iindlela ezithile ngaphakathi kwefama apho unokuhamba khona ngexesha lakho lokuphumla.
Ukuba kukho nantoni na oyifunayo, ndingummelwane nje. Kwaye ukuba ufuna ukwabelana ngeglasi yewayini okanye i-nibble kunye nosapho lwethu, oko kungcono! Ukuba uyafuna, siya kukuvuy…